IJacuzzi enokuthambeka- Ngaba uyazi zonke izibonelelo zayo ezinkulu? | IBezzia
IJacuzzi enokuthamba: Ngaba uyazi izibonelelo zayo ezinkulu
Ukuba ne-jacuzzi e-inflatable lolunye lolona khetho lubalaseleyo kwikhaya lethu kwaye kunjalo, kwigadi yethu. Ukuba sinendawo kumacala omabini, lixesha lokucinga ngendlela yokuyihombisa kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokuyenza ngaphandle kwembono yokuba siza kukucebisa namhlanje kwaye uza kuyithanda ngokuqinisekileyo.
Ngenxa yokuba ukuba ne-jacuzzi liphupha elikhulu labaninzi. Ayisiyiyo kuphela eyokuthi sinayo, kodwa ngenxa yokuba inezibonelelo ezinkulu ekufuneka sizithathele ingqalelo. Kungoko kuphela apho uya kuthi ucoce amathandabuzo malunga nokuba uyithenge okanye ungayithengi, kodwa sele sikuxelele ukuba isisombululo siya kuba sesona silungileyo kuwe nakusapho luphela. Fumanisa!
1 Yithi ndlela-ntle koxinzelelo ngombulelo kwi-jacuzzi enokungeniswa
2 Uya kukhulula iintlungu zemisipha
3 Ungayihlanganisa okanye uyidibanise xa ufuna
4 Ukubonakala kwesikhumba kuya kuphucula
5 Unyango olukhethekileyo lwe-arthritis
Yithi ndlela-ntle koxinzelelo ngombulelo kwi-jacuzzi enokungeniswa
Zombini i-jacuzzi kunye ne-spa ziluhlobo lwedama elinamabhamu anyangayo. Ke enye yezibonelelo zokuqala zazo kukuba inokunciphisa kakhulu uxinzelelo lwakho. Ngokuqinisekileyo awukho umhla apho unokuphumla ngokupheleleyo. Oku kwenza ukuba umzimba uhlale uxinene ngenxa yomsebenzi, ikhaya kunye nezinye iingxaki. Ke, ibhafu phakathi kwamaqamza iyakuphumla kuzo zonke ezo ndawo zinesivumelwano kwaye uya kuqaphela isiqabu esikhulu esivela ekushiyeleni uxinzelelo olukhulu ngasemva. Ngaba sele uyizamile?
Uya kukhulula iintlungu zemisipha
Ngaphambi kokuba sikhankanye uxinzelelo kwaye ngoku into enxulumene nenqanaba elithile. Kuba iintlungu zisenokuba luthotho lweengxaki ezongeziweyo. Ngokukodwa ukuba banemisipha, uya kufumana impilo nge-jacuzzi e-inflatable. Kuba ngale nto iya kuba yeyinye yeejethi eziza kuphuma kuyo eziza kuba nazo zonke izinto ezibalaseleyo. Ngokuqinisekileyo oko ngokwenza kusebenze ukujikeleza, kuyayiphumlisa indawo kwaye kwenzakele kancinci kunokuba sicinga. Le yinxalenye yendibaniselwano yamanzi ashushu kunye neejets ezisebenzayo. Ke ukuba yimizuzu nje embalwa suku ngalunye, siya kuqaphela ngokukhawuleza ukuvela kwezi ntlungu.
Ungayihlanganisa okanye uyidibanise xa ufuna
Ilungile ngayo yonke into enokuhlanganiswa kwaye idityaniswe, ke kule meko ayishiywanga ngasemva nayo. Mhlawumbi ngexesha lasentwasahlobo okanye lasehlotyeni kuhlala kucetyiswa ukuba ucinge ngokuyibeka ngaphandle, ngexesha lasebusika, ungaliqhekeza kude kufike esinye isaziso. Ukusuka kwinto esinokuthi ukuba yinto esebenzayo kwaye eyenza ukuba ibe nokuguquguquka okuninzi, njengoko siyithandayo. Ngenxa yoko, yenye yeengongoma ezifanelekileyo ukuba ziqwalaselwe.
Ukubonakala kwesikhumba kuya kuphucula
Kungenxa yokuba ayizizo zonke izibonelelo ezaziza kugxila ngaphakathi, kodwa zinokubonwa ngaphandle. Oku kuthetha ukuba lulusu olunezinto ezininzi zokuthetha. Kwisandle esinye izakujongeka ngathi yenziwa ngamanzi. Yintoni eya kuyenza ibonakale igudileyo kwaye inemibimbi simahla ngaxeshanye. Ke, ngokuqinisekileyo awuyi kuba nako ukumelana nokuthenga i-jacuzzi e-inflatable usazi ukuba ayisiyiyo kuphela impilo yakho eya kuphucuka kakhulu, kodwa konke oku kuya kubonakala ngaphandle.
Unyango olukhethekileyo lwe-arthritis
Inyani yile yokuba abanye izifo ezifana nohlobo lwethamboAbanalo unyango oluchanekileyo. Oko kukuthi, kuya kufuneka siphile nabo ixesha elide. Kodwa uhlala ukhetha ezinye iindlela ezilula ukuze ubenakho ukuzinciphisa. Kungenxa yoko le nto sithetha ngeJacuzzi. Umdibaniso wamanzi kunye nobushushu ukukhuthaza iingxaki ezithile zempilo, njengoko sibona. Kuyinyani ukuba izifo ezinganyangekiyo ziya kuqhubeka ukoyisa kodwa ngokwenene siyabulela ngeli nyathelo, siya kuphucula kwaye siqaphele indaleko elungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » IJacuzzi enokuthamba: Ngaba uyazi izibonelelo zayo ezinkulu
Ukukhutshwa sisitshixo sokwenza iinwele zakho zikhule ngokukhawuleza